Mpiadina miisa 5 370 no miatrika ny fanadinam-panjakana BEPC manerana ireo CISCO 5 amin’ireo Distrika 5 mandrafitra ny Faritra Menabe. Mitsinjara amin’ny ivon-teoram-panadinana miisa 22 ireo mpiadina. 11 taona ny zandriny indrindra ao amin’ny Sekoly Tsy miankina Espoir CISCO Mahabo, ary 50 taona ny zokiny indrindra, Candidat libre ao amin’ny CISCO Mahabo ihany. Ho an’ny fanadinana BEP kosa dia miisa 78 ireo mpiadina amin’ny ivon-toeram-panadinana telo ato amin’ny Faritra Menabe, dia ny ao Morondava, Belo/Tsiribihina ary Miandrivazo, izay ahitana lalam-piofanana roa, dia ny "naval bois" sy "Gestion". Iraisan’ny mpiadina rehetra manerana ny Nosy ireto fanadinam-panjakana BEPC sy BEP ireto, izay tanterahina ao anatin’ny fanajana tanteraka ireo lamina ara-pidiovana sy ara-pahasalama rehetra amin’ny ady atao amin’ny valanaaretina Covid-19. (Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 13 septembre 2020 18:51
Mahanoro-Marolambo: Lalana 130 km, 5 andro vao todin’ny kamiao
Ratsy, mampitaraina ny mponina ny lalana mampitohy an’i Mahanoro amin’i Marolambo, Faritra Atsinanana. Lalana mirefy 130 km eo io, tsy afaky ny fiara madinika, 5 andro vao todin’ny kamiao amin’ny fotoana maina, fa mety ho tapa-bolana an-dalana rehefa fahavaratra. Adin’ny 12 ora ka hatramin’ny roa andro raha moto.Distrika mamokatra i Marolambo toy ny kafe, akondro, … (Jereo Sary Tohiny)
samedi, 12 septembre 2020 09:15
Les Fondations et Associations reconnues d’utilité publique
Les Fondations et Associations reconnues d’utilité publique depuis l'application de la loi 2004_014 du 19 août 2004 portant refonte du régime des fondations à Madagascar Par date la plus récente, parues dans le Journal Officiel 1- Fondation « ANDRY RAJOELINA »DECRET N°2019-2 115Siège sociale: Immeuble Arena Ivandry, AntananarivoObjet: Santé, éducation, environnement, social et économiqueSignataire: 20 novembre 2019, PM Christian NTSAY
Ny Malagasy dia anisan'ny mihinan-kena atao laoka ho an'izay mbola mahatakatra an'izany. Mitana ny lohalaharana amin'izany ny hen'omby, ny akoho, indrindra ny poulet de chair, na ny akoho fakana nofony, ny kisoa, ny ondry, ny osy, ny vorona sy ny bitro. Vitsy ny mihinana soavaly. Isaky ny renivohitry ny distrika, sy ireo Kaominina lehibe dia saika ahitana labatoara, toerana famonoana sy fitsarana ireo henam-biby ireo, izay sahanin'ny veterinera any an-toerana. Efa antitra na tsy araka ny fenitra ara-phasalamana anefa ny maro amin'izy ireo.Tsy voahaja ny toerana ametrahana ny biby vao tonga, ny toerana anavahana ireo izay tsy salama, ny fikarakarana ny biby mba haka aina tsara vao vonoina, ny fahadiovan'ny toerana famonoana, ny fisian'ny rano madio anasana ny biby avy novonoina, ny toerana anadiovana sy andrasana ny biby efa maty, ny anavahana ny hoditr'ilay biby, ny toerana anariana sy hikarakarana ireo maloto tsy hivarina eny rehetra eny.
Nanolotra tablette miisa 65 ho an’ny fanjakana malagasy ny Tetikasan’ny Filoham-pirenena Miady amin’ny Tazomoka (PMI) sy ny Sampandraharaha Amerikana misahana ny Fampandrosoana Iraisam-pirenena (USAID) hamongorana ny tazomoka any amin'ny distrikan'Antsirabe II sy Antsiranana I. Hozaraina amin’ny sampandraharahan’ny fahasalamana sy ny tobim-pahasalamana any amin’ny distrika ireo tablette novatsian’ny governemanta amerikana ireo.
Tahirin-tsary nindramina fanehoana
Izay tsy sempotry ny coronavirus dia ho sempotry ny doro tavy indray kelikely eo. Hidolovoka afaka fotoana fohy ny ala atsinanana, hoy ny mpisehatra amin’ny fiarovana ny tontolo iainana any an-toerana. Voakasika hatramin’ny faritra arovana sy ireo valan-javaboary mitahiry harena sarobidy ho an’ny zanak’olombelona. Ao anatin’ny fanaovana tavy sy ny tevy ala ny mponina any amin’ny distrikan’i Marolambo, Mahanoro, Antanambao Manampontsy, Vatomandry, Anosibe An’ala, Brickaville, Toamasina II, Fenoarivo Atsinanana, Soanierana Ivongo, Vavatenina, Moramanga, Ambatondrazaka, Andilamena, Maroantsetra… ankehitriny.
Nanome tohana ara-tsakafo ho an'ireo beantitra ao Moramanga, androany ny hetsika Tantsoroka Covid-19. Nisitraka tohana ihany koa ireo fianakaviana manana zanaka « autiste » ao an-toerana. Hetsiky ny fiarahamonim-pirenena ny « Tantsoroka Covid-19 » entina hanaovana Tantsoroka ireo mpitsabo sy vondron'olona tena marefo manoloana ny valanaretina coronavirus. (Jereo Sary Tohiny)
Namoaka didim-pitondrana manambara ny fiverenan’ny fitateran’olona manerana ny faritra Alaotra-Mangoro ny lehiben’ny fileovan’Ambatondrazaka (préfet), Rahajavololona Nirintsoa Harinandrasana, ny talata faha-25 aogositra. Miverina miasa ny fitaterana iombonana amin’ireto zotra manaraka ireto : - zotra rezionaly Moramanga-Vohidiala, Ambatondrazaka-Andilamena, Ambatondrazaka-Amparafaravola ary Amparafaravola-Andilamena;- zone suburbaine mampitohy ny renivohitry ny distrika dimy sy ireo tanàna manodidina azy. Tsy maintsy ao anatin’ny fanarahana an-tsakany sy an-davany ny fepetra ara-pahasalamana anefa izany ary ho hentitra ny fisavàna sy ny fanarahamaso.
samedi, 22 août 2020 11:47
Moramanga: Hidina 50% avokoa ny vidin-drano amin'ireo paompy sy fanasan-damba iombonana
Manomboka ny Sabotsy 22 Aogositra 2020 izao dia hidina 50% avokoa ny vidin-drano amin'ireo bornes fontaine sy bassin fanasan-damba rehetra eto an-tampontanan'i Moramanga. Nandritra ny fandalovan'ny minisitry ny Rano, ny fanadiovana sy ny fidiovana, Rakotovelomanantsoa Voahary taty Moramanga ny herinandro lasa teo no nanomezany toky ny hanampiana ny vahoakan'i Moramanga izay mividy rano mandritra izao fihibohana noho ny fisian'ny valanaretina Covid-19 izao.
Nanomboka androany, ary hitohy hatramin’ny zoma izao, ny telo andro hanaovan-dry rasazy sy ireo Paramedy hetsika firaisankina sy fisaonana ho an’ireo namany namoy ny ainy sy iadiana amin’ny herisetra toy ny tifitra, fanolanana, fakana ankeriny mianjady amin’izy ireo, indrindra ireo Paramedy miasa any ambanivohitra. Saika nanerana ny Nosy no nanamarika izany androany, manaraka ny lamina sendikaly.